Haddii Jan Oblak Lagu Naanaysay Messi-ga Goolhayayaasha Alisson Waa…… – Tababaraha Khaaska Ah Ee Alisson Becker Oo Xiddigiisa Naanays U Bixiyay – Gool24.Net
Haddii Jan Oblak Lagu Naanaysay Messi-ga Goolhayayaasha Alisson Waa…… – Tababaraha Khaaska Ah Ee Alisson Becker Oo Xiddigiisa Naanays U Bixiyay
Tababaraha goolhayayasha Liverpool ee Jack Robinson ayaa naanays u bixiyay goolhayaha dookha koowaad ee kooxdiisa ee Alisson Becker isaga oo ku naanaysay magaca halyeey weyn oo kubadda cagta ah.
Goolhayaha heer caalami ee xulka qaranka Brazil ayaa lacag 65 Milyan oo Pound ah ugu soo wareegay Liverpool sanadkii 2018 isaga oo si buuxda uga soo bahay baahidii goolhaye ee ay kooxdiisu qabtsay isaga hortii.
Imaatinka Alisson ee Liverpool ayaa ka dhigtay inuu noqdo mid kamida boosaska kaliya ee ka dhinaa kooxdiisa kahor imaatinkiisii maadaama oo uu kooxdiisa ka dhigay quwad si dhammaystiran ugu tartanta koobabka waaweyn ee muhiimka ah.
27 sano jirkan ayaa ah mid kusoo baxaya falsafada ciyaareed ee tababare Jurgen Klopp maadaama oo uu baaska ku wanaagsan yahay oo uu kubadda xaga dambe kasoo dhisi karo isla markaana uu gacmaha si fiican ugu daafacan karo.
Haddaba, hore ayaa loosoo maqlay in tababaraha Atletico Madrid ee Diego Simeone uu goolhayaha kooxdiisa ee Jan Oblak kusoo tilmaamay Lionel Messi-ga goolhayayaasha iyadoo ay naanaystaasi noqotay mid hirgashay.
Jack Robinson oo tababar siiya Alisson ahna tababaraha goolhayayaasha kooxda koowaad ee Reds ayaa haatan Alisson markiisa la bar-bardhigay halyeeyga ree Talyaani ee Andrea Pirlo isaga oo ka eegay dhinaca degenaanta.
Robinson oo amaanaya Alisson ayaa yidhi “Waa mid aan la rumaysan karin, isagu waa sida Pirlo oo kale ama qof sidaas oo kale ah”
“Isagu dhab ahaan waa mid degen marka uu kubadda haysto waxaana uu doonayaa inuu kubadda helo isaga oo cadaadis ku hoos jira, sida aad ku aragtaan kulamada”